Imishado yango-2022 - Izitayela ezinkulu zokuhlobisa | Bezzia
USusana godoy | 13/05/2022 16:00 | Umshado
Imishado ka-2022 isivele iyaqala, ngakho-ke kufanele sazi ukuthi yiziphi izitayela ezinhle zokuhlobisa ezishanelayo. Njengoba cishe ngokuqinisekile bazokunikeza uchungechunge lwemibono ukuze ukwazi ukukhuthaza umshado wakho kuzo. Uma kungumkhuba, kuyadabukisa futhi kuyizinketho ezizonikeza okuningi ukukhuluma ngazo.
Ngakho-ke, uma ufuna konke lokho ngosuku lwakho olukhulu, awukwazi ukuzibamba kodwa ukuhlangabezana nabo. Kuyiqiniso ukuthi yonke into ezungeze umshado iqondene nomuntu. Ngakho-ke okungcono kakhulu esingakwenza thatha lezi zindlela njengogqozi futhi uzifake emshadweni wethu ngokusho esikuthandayo. Impela ungazivumelanisa nalokho obukucabanga ngosuku lwakho olubaluleke kakhulu!
1 Imibala ekhanyayo nengokwemvelo yemishado yango-2022
2 Ukukhanyisa kuthathwe izibani ezilengayo
3 Amatafula ahlanganisiwe emhlobiso womshado ka-2022
4 Bhejela ekuhleleni izihambeli ngendlela yokuqala
Imibala ekhanyayo nengokwemvelo yemishado yango-2022
Itimu yemibala ihlale ingenye ephawulwe kakhulu. Kodwa kulokhu kubonakala sengathi ukuzibophezela kwamathoni angathathi hlangothi kuza ngamandla. Ngakho kokubili i-shades emhlophe ne-beige ne-lighter izokwengezwa kuphalethi yezinketho. Ngoba lokho ofuna ukukuzuza kuyindawo engokwemvelo, exhunywe nemvelo esizungezile. Ngenxa yalesi sizathu, sizoshiya ngemuva imibala egqama kakhulu ukunikeza izikhala ezilinganiselayo. Kunjalo, uma ufuna ukwengeza i-hue egqamile, uyazi ukuthi ungahlala uyishintsha ngokuya ngokuthanda kwakho.
Ukukhanyisa kuthathwe izibani ezilengayo
Ukukhanyisa kungenye yezingxenye ezibaluleke kakhulu uma kuziwa ekuhlobiseni umshado. Ngoba singayisebenzisela ukugqamisa nakakhulu idili. Ukuqhubeka nokuqedwa kwemvelo, sibhekene nenketho lapho izibani ezilengayo kuzoba ama-protagonists angempela. Kepha hhayi ukukhanya kakhulu, kepha bazoba nesiphetho sengilazi esiyenza ibe nesiphetho esihle kakhulu. Yiqiniso, amakhandlela abuye abe enye yemininingwane ebalulekile. Ukuze kungabikho izinkinga, ungawabeka ngaphakathi kwama-vases engilazi, unikeze umhlobiso umoya oyinkimbinkimbi.
Amatafula ahlanganisiwe emhlobiso womshado ka-2022
Iminyaka embalwa manje, bafuna ukwephula umthetho olandelwayo. Njengoba le nto yokuba namatafula amade, ehlala ehlukanisiwe nomakoti, akuyona into egcina ithandwa izikhathi eziningi. Ngakho-ke, kungaba nenhlanganisela yawo womabili amatafula amade nayindilinga. Ngaphezu kwalokho, sekunesikhathi eside ikwenza futhi kubonakala sengathi izoqhubeka iphumelela. Ngaphandle kwalokho, umakoti nomkhwenyana abahlali njalo nogogo, kodwa njalo uma ubona ukuthi bahlezi etafuleni bodwa. kodwa eduze izivakashi, noma ngisho komunye nomunye. Kufanele njalo ukhethe ukuthi yini ehamba kahle ngombhangqwana ngamunye, kodwa kuyiqiniso ukuthi izivumelwano zibonakala zishiywa eceleni.
Bhejela ekuhleleni izihambeli ngendlela yokuqala
Aphelile lawo matafula anezinombolo futhi kulelo nalelo qoqo kwabuthana izivakashi ezimbalwa. Hhayi-ke, imvelaphi ibekwe kuyo yonke imishado ezihloniphayo. Ngakho-ke, esikhundleni salezi zinombolo ungazibeka njalo ukubeka etafuleni ngalinye izihloko zezingoma noma amamuvi ngisho namagama abadlali. Noma yini ihamba inqobo nje uma kuwukuqedela umbono ngendlela ewuqobo. Kubonakala sengathi unyaka nonyaka amasu amasha asohlangothini lwethu futhi ngomcabango omncane asengaba ngaphezu kokuphumelela. Ngendlela efanayo, ungakwazi njalo ukubeka ukhokho lapho ushicilela lonke uhlu olunamagama noma, etafuleni ngalinye, ubeke imininingwane ethile echaza igama layo. Ingabe lokho akuzwakali njengombono omuhle? Ngemuva kwalokho ungaya ngokuhlobisa umshado ka-2022
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Indlela yokuphila » Umshado » Izitayela ezinhle zokuhlobisa umshado 2022
Kuyini ukuhlinzwa kwe-refractive?